Dagaalladii iyo madaafiicdii magaalada Muqdisho oo maalintii 3-aad galay. – Radio Daljir
Maarso 12, 2010 12:00 b 0
Muqdisho, Mar 12 ? Dagaalladii iyo duqaymihii cuslaa ee magaalada Muqdisho, una dhaxeeyey dawlada federaalka iyo AMISOM oo isku dhinac iyo xoogagga hubaysan ayaa galay maalintii saddexaad.
Dagaalladaan oo ah kuwa aan waxba la iskula harin, ayaa gaystay khasaarooyin badan oo iskugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed oo aad u baaxad-weyn, waxaana sidoo kale dagaalladu ay keeneen barakac aad u tiro badan.
Inta la xaqiijiyey illaa dad ka badan 57 qof ayaa dagaallada iyo madaafiicda ku dhintay dhawrkii maalmood ee ay weeraradu dhacayeen, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 114 qof, sida ay xaqiijiyeen goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdusho.
Cabsida iyo cararka dadka shacabka ah ayaa sii xoogaysanaysa maalinba maalinta ka danbaysa, waxaana xaafadahoodii ka cararay kumanaan qooys kuwaasi oo u baxsaday goobaha xasiloon ee ka baxsan magaalada Muqdisho.
Madaxda dawladda federaalka, ayaa ka dhawaajiyey in ay qorshaynayaan dagaalladu in ay sii xoogaystaan illaa iyo inta magaalada ay kala wareegayaa xoogagga mucaaradka ah oo inta badan xukuma magaalada, waxaana la filayaa haddii aan xal loo helin dagaalka khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawacba in ay inta ka sii badtaan.